၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း google မှာ အမေးများဆုံး အချစ်ရေးမေးခွန်းတွေ
အဲ့ဒီအတွက် အကြံပေးချက်အချိ့ကိုလည်း www.duwun.com.mm/women/relationships/ မှာ ရေးပေးထားတာမို့ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုခု သိချင်တာများ google ခေါက်လိုက်ပေါ့၊ google လိုက်လေ .... စသဖြင့် ပြောကြတယ်ဟုတ်? သိချင်တာမှန်သမျှကို google မှာ ရှာဖွေဖတ်ရှုကြတဲ့အထဲ အချစ်ရေးလည်း ပါတာပေါ့။ Google ကုမ္ပဏီဟာ တစ်နှစ်တာအတွင်း လူတွေရှာဖွေခဲ့ဆုံး အချက်အလက်တွေကို ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း လူတွေဟာ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်လိုမျိုးတွေ ဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့နေရသလဲဆိုတာကိုလည်း သူတို့ရှာဖွေခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေက သက်သေပါပဲ။
အရှာအများဆုံး မေးခွန်းကတော့ " How to make long distance realtionships work?" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ အနေဝေးနေတဲ့ချစ်သူတွေ သွေးအေးမသွားဘဲ အချစ်တွေနီးနေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့။ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ နေကြရင်း ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြသူတွေနဲ့၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝေးနေရတဲ့ ချစ်သူတွေ အတော်များလာပုံပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွက် အကြံပေးချက်အချိ့ကိုလည်း www.duwun.com.mm/women/relationships/ မှာ ရေးပေးထားတာမို့ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယမြောက် အမေးများဆုံး၊ အရှာဖွေဆုံး မေးခွန်းကတော့ နည်းပညာနဲ့ ဆက်နွှယ်နေတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ relationship status ကို ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာ သိချင်သူတွေ များပြားခဲ့တယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်အသုံးပြုသူတွေဟာ ရပ်တန့်မရလောက်အောင် ပိုမိုများပြားလာကြတာလည်း ပါပါတယ်။ ကျန်တဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ရော ဒီမေးခွန်းတွေထဲက တစ်ခုခုကို google မှာ ရှာဖွေဖူးပါသလား။
၁။ အနေဝေးတဲ့အချစ်ရေး အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
၂။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ relationship status ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ
၃။ အချစ်ရေးမှာ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ
၄။ "poly relationship" ဆိုတာ ဘာလဲ
၅။ အချစ်ရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ
၆။ "open relationship" ဆိုတာ ဘာလဲ
၇။ အချစ်ရေးတစ်ခုကို ဘယ်လို အဆုံးသတ်ရမလဲ
၈။ အဆိပ်သင့်သလို ဆိုးရွားတဲ့အချစ်ရေးကနေ ဘယ်လိုရုန်းထွက်ရမလဲ
၉။ ကိုယ့်အချစ်ရေး ဆုံးခန်းတိုင်ပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
၁၀။ သာယာအဆင်ပြေနေတဲ့ အချစ်ရေးဆိုတာကရော ဘာနဲ့တူလဲ